कांग्रेसले नेकपाको रेकर्ड तोड्यो, चियापानमा एक लाखलाई निम्ता ! - Everest Dainik - News from Nepal
कांग्रेसले नेकपाको रेकर्ड तोड्यो, चियापानमा एक लाखलाई निम्ता !
काठमाडौं, कार्तिक १५ । नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई उछिनेको छ । उसले चुनावमा होइन चियापान कार्यक्रममा सहभागी ल्याउने संख्यामा उछिनेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांग्रेसले विजया दशमी, दिपावली, नेपाल संवत, छठलगायत पर्वका अवसरमा शुक्रबार चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ ।
याे पनि पढ्नुस सबै हल्ला हुन्, नेकपामा नयाँ धार छैनः नेता खनाल
याे पनि पढ्नुस हामी बदलिन्छौँ, देश बदल्छौँ, उमेर होइन कार्यसूचीका अाधारमा अगाडि बढ्छौं : प्रवक्ता शर्मा
ट्याग्स: cpn, Nepali congress